शनिबार, २१ मंसिर-२०७६
भोक र विचार कला / साहित्य१९ घण्टा
भाषिक चिन्तनमा ग्राइसको संवाद र सहयोग सिद्धान्त मिश्रेलीहरूले प्राचीनकालमै लेखन कलाको विकास गरेका हुन् । उनीहरू मृत्यु संस्कारमा अनेक मन्त्रहरू प्रयोग गर्थे । यस्ता मन्त्रको रक्षाका निम्ति लिपिको विकास आवश्यक थियो । यही आवश्यकताको फलस्वरूप उनीहरूले चित्राक्षर लिपिको आविष्कार गरे भनेका छन् । कला / साहित्य१८ घण्टा
बजारमा नयाँ पुस्तक प्रेम र समाजका अनि मानिसका सूक्ष्मतम मनोवैज्ञानिक–सामाजिक विषय र प्रेमलाई सुन्दर ढंगले विषय बनाएर लेखिएको उपन्यास हो, ‘फिटकिररी ।’ यसै साता बजारमा आएको साजन केसीको यस पुस्तकले युवा र वयस्क दुवै पुस्ताको ध्यान तान्नेछ । कला / साहित्यशनिबार, २१ मंसिर, २०७६
लियो टल्स्टाय : ईश्वरको खोजदेखि दुखद् मृत्युसम्म उनी विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूको खोजीमा लाग्न थाले । टल्स्टायका अवधारणाहरूबाट स्वतन्त्र भारतका पिता महात्मा गान्धी एकदम प्रभावित भएका थिए । उनले टल्स्टायसँग सुझाव पनि मागेका थिए । कला / साहित्य१४ घण्टा
शर्तविहीन एउटा सम्बन्ध व्यावसायिक क्षेत्रका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले कुरा गर्दै स्न्याक पनि खाँदै थिए । अचानक किरणको हात रीमाको घुँडामा ठोकिन पुग्यो । रीमाले ‘सिइय’ गरेर सम्पूर्ण शरीर जिरिङ्ग भएको प्रतिक्रिया दिएको देखेर किरण एकछिन त आश्चर्यमा परे कला / साहित्य१४ घण्टा
भाषाका धरोहर बालकृष्ण पोखरेल नेपाली भाषा–साहित्यको क्षेत्रको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, यसको दुई दिनपछि नै उहाँको देहावसान भएको समाचार उनै साथीहरूलाई लेखाएर गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्‍यो ! कला / साहित्य२१ घण्टा
डा. रूपक श्रेष्ठका चार मुक्तक परबाटै नजरै नजरले बात मारेर यो मनलाई सुन खारेझैँ खारेर कोही चुपचाप गयो आज मेरो मूल्य तोकेर मेरो मुटु यता र धड्कन उता पारेर । कला / साहित्य१९ घण्टा
श्रीमद्भगवद् गीताले किन भन्याे कर्मण्येवाधिकारस्ते... ? सम्पूर्ण गीता निष्काम कर्मयोगको शास्त्र हो । त्यसमा कर्मयोगका प्रत्येक पहलूबारे विशद् व्याख्या गरिएको छ । तर, पूर्वभागमा वर्णनको रीति ‘समास व्यास विधिना’ थियो । कला / साहित्य२१ घण्टा
अन्त मा कस्सम ! '... ऊ जस्ती केटीलाई बाइक पछाडि राखेर घुमाउँदा पो बल्ल बाआमासँग कत्ति झगडा गरेर किनेको बाइकको फुल युपटलाइज भ’ जस्तो लायो । सबैले फर्कीफर्की हेर्थे यार ! सिङ्घम जस्तो फिल हुन्थ्यो मा कस्सम !’ कला / साहित्य२२ घण्टा